FBC - Jeettonni waraanaa Raashiyaa boombii buusan Ameerikaa bulchiinsa Alaaskaatti osoo balali’anii mula’atan
Jeettonni waraanaa Raashiyaa boombii buusan Ameerikaa bulchiinsa Alaaskaatti osoo balali’anii mula’atan
Finfinnee, Ebila 11, 2009 (FBC) Jeettonni waraanaa Raashiyaa boombii buusan Ameerikaa bulchiinsa Alaaskaatti osoo balali’anii mula’achuusaanii Ministeerri Ittisaa Ameerikaa beeksise.
Jeettonni waraanaa Raashiyaa ammaa naannoo daangaa Ameerikaatti balali’an kunniin biyyoonni lamaan dhimma Siiriyaa irratti wal-diddaa keessa wayita jiranitti ta’uunsaa waan irratti nama dubbachiisu ta’eera.
Jeettoonni waraanaa Raadaaraan hin mul’anne Ameerikaa lama jeettota waraanaa Raashiyaa kanneen daqiiqaawwan 12 dabaalanii balali’aa akka turan kan ibsan Dubbi-himaan Peentaagoon Komaandar Gireey Rooz, Humni Qilleensaa Ameerikaa Jeettonni Raashiyaa ‘TU-95’ naannoo daangaa Alaaskaa kiiloo meetiroota 160 irratti balali’aa akka turan arguusaaniiti kan himan.
Jeettonni waraanaa Ameerikaas jeettota waraanaa Raashiyaa kanneen hordofaa erga turanii booda jeettonni Raashiyaa gara bakka ka’umsaa isaaniitti deebi’aniiru.
Rooz akka jedhanitti hordoffichi of eggannoon geggeeffamaa kan jiruu fi seera idil-addunyaa kan cabse akka hin-taane ibsaniiru.
Dubbi-himaan Peentaagon xiyyaaronni waraanaa ‘TU-95’ meeshaalee waraanaa niwikilaraa baachuu kan danda’anidha kan jedhan yoo ta’u, xiyyaarota waraanaa kanneen keessa meeshaaleen niwikilaraa akka turan waanti mul’isu hin-turre jedhaniiru.
Madda: TV Pirees
Oduuwwan Biroo « Chaayinaan wal-diddaa Ameerikaa fi Kooriyaa Kaabaa gidduutti hammaachaa dhufee furmaata nagaa barbaaduufii barbaachisa jette	Ameerikaan Naayijeeriyaatti xiyyaarota waraanaa gurguruufi »